Malunga Nathi - Xianghe Qiangsheng Electric Tricycle Factory
IQiangsheng Group yasekwa ngo-2005, ifumaneka kwidolophu yaseXianghe (ipaseji yaseBeijing-Tianjing).Lishishini lobuchwephesha eligxile kwi-R&D yombane, imveliso, ukuthengisa, urhwebo kunye nenkonzo yezahlulo.
Umzi-mveliso wethu ugubungela ummandla oziimitha ezisisikweri ezingama-50,000, ungumnikazi weyona mveliso iphambili kunye nezixhobo zokubona, iindibano zocweyo zobuchwephesha bokuwelda, iindibano zocweyo zobuchwephesha, iindibano zocweyo zokupeyinta nge-electrophoresis kunye neendibano zocweyo.
I-tricycle yethu yombane inikezele ngamanani elungelo elilodwa lomenzi wechiza: Iasi ephindwe kabini ngasemva, ishedi enemisebenzi emininzi, i-Gearbox, ibhokisi yokugquma ye-Electic, isitulo esishukumayo, isitulo esisongwayo, njl. ukubonelela ngobudlelwane eMzantsi Asia, kuMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma Asia, eAfrika, eMzantsi Melika.
Kwimveliso yethu yeeMveliso, sigcina iMigangatho ePhakamileyo ukusuka ekuqaleni.
Ukukhetha izinto ezikrwada
Sikhetha iibrendi zemathiriyeli ekrwada ezithembekileyo njengeqabane lethu lentsebenziswano yexesha elide.Yonke ibhetshi yemathiriyeli ekrwada iya kuhlolwa ngokungenamkhethe phambi kokuba iziswe kwindawo yethu yokugcina impahla.Nje ukuba imathiriyeli yokuvavanywa ivavanywe, yonke ibhetshi iya kubuyiselwa kumthengisi.Ibakala lentsimbi esilisebenzisayo kumbane wethu yi-Q195 kunye ne-SPCCH.Ukutyeba kwesithuthuthu sombane somzimba wentsimbi yi-1.8mm–2.0 mm.
Ukusika kunye nokubetha
Ukusebenza okufanayo okuphezulu kunokuqinisekiswa ngokusikwa kwelaser yethu, i-hydraulic punching & CNC ityhubhu
Yonke into yokusika ilawulwa yikhompyutheni kwaye iqhutywe ngumshini wethu wokusika i-laser kunye ne-CNC yokusika i-tube kunye nokunyamezela okungqongqo.Umatshini we-hydraulic punching unika ixesha elide ukwenza ukunyamezela kwamalungu.
Ukuwelda kwerobhothi kusetyenziselwa eyona nxalenye iphambili yesithuthuthu sethu sombane, esiqinisekisa ubomi obude bomzimba wentsimbi kunye nokwandisa ukhuseleko lwabasebenzisi.
Electroplating kunye nokuPeyinta
Ngo-2011, i-Qiangsheng yatyala imali engaphezulu kwe-RMB2,000,000 kumgca wokudityaniswa kwepeyinti ye-cathode electrophoresis, esetyenziswa kakhulu kushishino lweemoto.Yonke ipeyinti esetyenziselwa ukwenziwa yipeyinti ekumgangatho ophezulu ngaphandle kongcoliseko, akukho vumba, kwaye akukho kuxobuka.Inceda kakhulu ekuNciphiseni i-corrosion-specific fix repair kunye neendleko zokugcina kunye nokunciphisa ukuguga kunye nokukrazula.
Ukusungula kunye nesebe leR&D yobuNgcali
Iimodeli ezintsha ze-erickshaw zinika abathengi ukhetho olutsha kwaye zifake amandla kwintengiso.Sinabasebenzi abangama-20 be-R&D kwimarike yasekhaya neyangaphandle.Nyanga nganye siphuhlisa iimodeli ezi-2 ezintsha kubathengi.
TukTuk Manufactures Electric Tuk Tuk iTukTuks Izithuthi ezinamavili amathathu ITuk Tuk iyathengiswa ITukTuk